Madaxweynaha Puntland oo Caawa Kormeer Shaqo ku tegey Qaybo Kamid ah Gaalkacayo – Puntland Post
Posted on January 1, 2018 January 1, 2018 by dalsan
Madaxweynaha Puntland oo Caawa Kormeer Shaqo ku tegey Qaybo Kamid ah Gaalkacayo
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa caawa oo ay tariikhdu tahay bilawga sanadka cusub 01 January 2018 kormeer shaqo ku tegey qaybo kamid ah magaalada Gaalkacayo.
Kormeerka Madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinaayey masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ugu horayn ka qaybgalay bandhigga mashruuca garoonka Cawaalle Liibaan oo si iskaa wax u qabso ah looga hirgelindoono magaalada Gaalkacayo, kaas oo noqondoona sida qorshuhu yahay [Insha Alla] garoon cagaaran oo loo dhisi doono mid lamida garoomada waaweyn ee caalamka ka jira.
Guddiga loo igmaday dhismaha garoonka ayaa soo bandhigay qaab dhismeed uu yeelandoono garoonku, waxaana ay iyana soo bandhigeen sida ugu sahlan ee looga qayb-qaadan karo hirgelinta dhismaha garoonka Cawaalle liibaan, Madaxweynaha oo ka jawaabay qaadhaanka dawladda loo asteeyey ayaa sheegay in dawladdu bixinayso isla wakhtigaasi lagu gudajirey madasha bandhigga dhismaha garoonka Cawaale Liibaan.
“Waxaad kasoo qaaddaan lacagta qaadhaanka ah ee aad nagu qorateen inay jeebkiina ku jirto hadda, waxaan rabnaa inuu mashruucani sida ugu wanaagsan u hirgalo, noqdo mid socda oo gobolada oo dhan gaadha, waxaan rabaa qaybaha kala duwan ee bulshada inaan ku booriyo inay iyana ka qayb qaataan dhismaha garoonka gaar ahaan qurba, joogta, ganacsatada iyo bulshada rayid ka ahba ee dhammaantood qaybta ka ah ka qayb-qaata yaasha dhismaha garoonka” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
“Garoonka waxaa loogu magacdaray Maxamed Cawaale Libaan oo inaga mudan tariikh, waa aasaasihii calanka Soomaaliyeed, inuu qurux badnaado oo dhammaystirnaadaa waxaynu u hiilinay marxuunka, waayo waxaynu illaalinay tariikhda magaciisa” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay dhismaha goobta lagu soo bandhigayey qaab dhismeedka garoonka Cawaale, waxaana uu Madaxweynuhu sheegay in ay hirgelisey mashruucani hay’adda SSF [ Somali Stability Fund ], isla markaana waxa uu xusay Madaxweynuhu in mashruucani dawladda Puntland wax badan kaga faa’iidaysatay kaabidda adeegyada bulshada, sida dhismayaasha saldhigyada, maxkamaddaha, ceel biyoodyo, laydhadh [solar system] iyo garoon kani caqaaran oo dhawaan laga hirgeliyey magaalada Gaalkacayo.
Dhinaca kale Madaxweynaha ayaa ku booriyey shacabka Puntland inay ku dhiiradaan wax wada qabsiga, iskaashiga, hal abuurka, horumarka, nabadaynta iyo xasilinta dalkooda, isla markaana aanay ka daalin isku tashiga ay ku horumarsadeen dhulkooda.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamd Cali Gaas ayaa intaasi kadib kulan casho sharaf ah laqaatay waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, isimo, culuma-awdiin, nabadoono iyo waxgarad kale, casha sharafta oo lagu marti qaaday Madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ee wehlinayseyba ayaa ka dhacday guriga maamo Xaawo Aadan ee magaalada Gaalkacayo.
Taliye lagu dilay dagaalka Guriceel iyo wararkii ugu dambeeyay
Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug oo qabsaday xaafado ka tirsan Guriceel
Guddiga doorashooyinka Puntland oo la wareegay ciidamo u xil saaran sugida Amniga doorashada
Taliyaal loo magacaabay Xasilinta Gobolka Mudug labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug